ngwe saung Archives - LODGGY
Myanmar Treasure Resort Review
For this week review, we will be introducing Myanmar Treasure Resort. I hope this review is helpful for anyone going to Ngwe Saung for vacation.
အပန်းဖြေအနားယူဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအဖြစ် ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ Ngwe Saung Yacht Club & Resort ကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Hotel Review အဖြစ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီအပန်းဖြေနေရာလေးကတော့ ငွေဆောင်ရွာနဲ့ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကွာအဝေးမှာရှိတဲဲ့ မဂျီမော် ကျေးရွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီအပန်းဖြေစရာနေရာလေးအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဟိုတယ် Review လေးကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပါဦး။ တည်နေရာ Ngwe Saung Yacht…
ငွေဆောင်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေခရီးသွားကြမယ်ဆိုရင် ကမ်းခြေတစ်ခုခုကို အလည်သွားတာ အကောင်းဆုံးဆိုရင် အားလုံးလက်ခံကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အခုနွေရာသီလဲ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ ကမ်းခြေသွားအပန်းဖြေမယ့် ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်ငွေဆောင်သွားတုန်းက တည်းခဲ့တဲ့ Grand Ngwe Saung Hotel လေးအကြောင်း review ပြောပြချင်ပါတယ်။ Updated : Sept 2017